कस्तो अचम्मको कलात्मत टाटु ? पत्याउनै गाह्रो [हेर्नुहोस् तस्विरहरु] - pnpkhabar.com
You are at:Home»रोचक खबर»कस्तो अचम्मको कलात्मत टाटु ? पत्याउनै गाह्रो [हेर्नुहोस् तस्विरहरु]
By रबि धिताल on १४ पुष २०७४, शुक्रबार ०३:१७ रोचक खबर
काठमाडौं, पुस १४: आजभोली आफ्नो शरीरमा टाटू बनाउनु युवापुस्ताको एक फेशन ट्रेण्ड नै बनेको छ। तर कतिपयले टाटु कलात्मत तरिकाले बनाउँदछन्। कतिपयले यस्ता टाटु बनाउँछन् की टाटु हेर्दा पत्याउनै गाह्रो हुन्छ की त्यो टाटु हो वा अरु नै उपद्रो। टाटू आर्टिस्टले यस्तो टाटू समेत बनाउन सफल भएका छन्, मानौँ मानिसको जिउमा उनीहरुले कोटमै जस्तै टाँक लगाइदिएका छन्। त्यस्तै टाउकामा इँटा नै जमाएजस्तो गरी समेत टाटू खोपिदिन्छन्। घुँडा चर्किएजस्तो तथा तथा पिठ्यूँमा आँखा पलाएजस्तो टाटू बनाउने क्रम पनि बढेको छ।
पछिल्लो समय थ्री डी टेक्नोलोजीको सहायताले विशेष खालको मसी प्रयोग गरी शरीरमा अनौठा टाटू बनाउने फेशन चलिरहेको छ। यस्ता टाटू पत्याउनै नसकिने खालका समेत हुने गरेका छन्। हेर्नुहोस् विश्वाश नै नलाग्ने थ्री डी टाटूहरुका केही नमुनाहरु: